Arsene Wenger: ‘Alexis Sanchez kuma uusan dhawaan in uu ka tago Arsenal’ | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Arsene Wenger: ‘Alexis Sanchez kuma uusan dhawaan in uu ka tago Arsenal’
Arsene Wenger: ‘Alexis Sanchez kuma uusan dhawaan in uu ka tago Arsenal’
Muqdisho – Tababaraha kooxda Arsenal, Arsene Wenger ayaa sheegay in Alexis Sanchez uusan marnaba ku dhawaan in uu baxo kana tago Arsenal maalintii ugu danbeysay suuqa ee 31-ka August.
Chilean-kan uu waqtigiisu idlaanayo dhamaadka xagaagan ayaa ka tagi kara Emirates Stadium sanadka soo aadan, waxaana si xoogan loola xariirinayay in uu u dhaqaaqi doono Manchester City maalintii ugu danbeysay suuqa kala iibsiga.
Waxaa la fahamsanaa in Citizens ay diyaar u aheyd inay bixiso 55 milyan oo ginni oo ay ku iibineyso weeraryahankii hore ee Barcelona, ​​laakiin Arsenal ma aysan awoodin inay hesho AS Monaco xiddigeeda Thomas Lemar, kaas oo la aaminsanaa haddii ay heli laheyd in Sanchez uu u wareegi lahaa City.
Sanchez ayaa lagu soo waramayaa inuu dalbaday inuu ka tago Arsenal kuna guuldareystay isku daygiisii uu kaga baxayay Gunners bishii lasoo dhaafay, laakiin Wenger ayaa sheegay in xiddiga reer Chilie uusan marnaba ku dhaweyn inuu baxo.
“Ma aheyn mid aad u dhow, waa adag tahay in aan ka hadlo arrintaas sababtoo ah waxa aan doonayo hadda waa in ciyaaryahanku diirada saaro xirfadiisa ciyaareed,” ayuu Wenger u sheegay beIN Sports.
Sanchez ayaa ka soo muuqday kulankiisii ugu horreeyay ee Arsenal xilli ciyaareedkan kulankii ay guul darrada 4-0 aheyd kala kulmeen Liverpool.
Previous: Kevin Mirallas: waxaan doonayay in aan ku laabto Olympiacos’.
Next: Belgium oo noqday xulkii ugu horeeyay Yurub ee usoo baxa Koobka Adduunka 2018.